Mpanamboatra sy mpamatsy milina famenoana labiera any Sina | OBeer
Masinina mameno labiera
Ny Filling Systems dia manome amina tavoahangy labiera mandeha ho azy & manual (fanoherana tsindry) labiera sy milina fanenomana, ahitana ny «rinser», ny mpameno & ny capper / seamer monoblocks mahomby.
Tsipika famenoana tavoahangy labiera
Ireto andalana fameno labiera ireto dia azo ampiasaina amin'ny famoahana tavoahangy maro be ihany koa na dia zava-pisotro toy ny rano, divay, cider, kombucha, zava-pisotro mahery na zava-pisotro misy gazy.
Ny tsipika famenoana dia afaka manome tsipika 1000BPH, 2000BPH Line, 3000BPH Line, 5000BPH Line, 6000BPH Line, 8000BPH Line araka ny fahaizanao labiera.
1. Ny fampiasana ny mpampita hafatra dia nandefa fidirana ary mamindra kodiarana ao anaty tavoahangy mifandraika mivantana amin'ny teknolojia; nofoanana ny rojo sy ny rojo mpampita, izany dia ahafahan'ny fanovana miova endrika ny tavoahangy.
2. Ny fandefasana tavoahangy dia mampiasa teknolojia fantsom-bozaka vita amin'ny clip, tsy mila manitsy ny haavon'ny fitaovana ny fanovana tavoahangy, fa ny fiovana mifandraika fotsiny amin'ny takelaka miolaka, kodiarana ary faritra nylon dia ampy.
3. Ny clip vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny vy tsy miova dia mateza sy maharitra, tsy misy ifandraisany amin'ny toerana misy ny vava vava mba hisorohana ny fandotoana faharoa.
4. Valve feno valiny haingam-pandeha haingam-pandeha mameno valva, mameno haingana, mameno marina ary tsy misy rora mandrora.
5. Ny fihenan'ny tsiranoka rehefa mivoaka ny tavoahangy, manova ny endrika tavoahangy tsy mila manitsy ny haavon'ny rojo mpampita.
fahafahana(B / H) (330ml, 500ml, 720ml), 1000-8000Bottles
Haben'ny tavoahangy Vozony: φ20-50mm;Haavo:150-320mm
Mameno tsara <+ 1MM
Faneren'ny rivotra 0.4Mpa
Fanjifana rivotra (m⊃3; / min) 0.3
Weight(kg) Araka ny milina famenoana
lafiny(L * W * H)(MG) Araka ny milina famenoana
Previous: Rafitra fitsaboana rano ho an'ny mpamokatra labiera
Manaraka: Rafitra labiera mamirapiratra
Masinina mameno labiera kely
Masinina famenoana tavoahangy